Maitiro ekudzima komputa yaunovimba pane yako iPhone kana iPad | IPhone nhau
Maitiro ekudzima komputa yaunovimba pane yako iPhone kana iPad
Iyo yekuchengetedza michina iyo Apple yakaisa muIOS 7 uye iyo inodzivirira chero komputa yakabatana neako iPhone kana iPad kubva pakuitora pasina iyo mvumo yako yekutanga. Kana iwe ukabatanidza yako iPhone kana iPad kune komputa kekutanga, iri bhokisi rebhokisi rinozoonekwa pachiratidziro chemuchina wako, uye uchafanirwa kudzvanya paTrust kuti ubatanidzwe kuti iitwe. PAsi unobvisa sei makomputa awakapa mvumo?. Iyi sarudzo yakavanzika mukati meyekugadzirisa menyu uye yatichatsanangura pazasi.
Kana nekukanganisa ukabaya pane "Usatende" bhatani, unogona kuzvigadzirisa zviri nyore, iwe unongofanirwa kubatanidzazve chishandiso uye kana iro hwindo raonekwa, tinya pane chaiyo sarudzo. Asi kana iwe wakapa "kuvimba" uye wanga usingade, kana kuti hauchadi chero komputa kuti ive nemvumo, hazvisi izvo zvakapusa. Muchokwadi, haugone kudzima komputa yakapusaPanzvimbo iyoyo, uchafanirwa kudzima makomputa ese awakapa mvumo. Chii chimwe, uchafanirwa kubvisa nzvimbo uye zvakavanzika marongero.
Chokwadi, iwe unofanirwa kuenda kumenu «General> reset> Gadziridza nzvimbo uye zvakavanzika» uye nyora yekuvharira kodhi (kana iwe uchiishandisa). Ita izvi mvumo dzese dzaungadai wakapa kuzvishandiso zvine chekuita nekuwana nzvimbo yako, shamwari, nezvimwe. iwe uchafanirwa kuvapa zvakare, nekuti ivo vanenge vagadzwazve. Kana iwe uchida kugonesa komputa, zviri nyore sekubatanidza zvakare yako iPhone kana iPad kwairi uye tinya Vimba zvakare. Iwe unosuwa imwe yakatarwa menyu yeichi chiitiko iyo inokutendera iwe kudzima yakapusa komputa, kana zvirinani haikumanikidza iwe kudzima zvese zvakavanzika uye nenzvimbo marongero emuchina wako. Panguva ino muIOS 9 haina kuchinja kana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekudzima komputa yaunovimba pane yako iPhone kana iPad
Nei sarudzo yekodhi isinga bude, inoramba ichingoita sekunge pasina pandinodzvanya, chero mhinduro, pls?
Huawei kuvhura wachi yakafukidzwa nendarama, kukwikwidza kweApple Watch?
Apple iri kuzozivisa nhevedzano yezvigadzirwa zvapera